ရုရှားမှ အမေ့ ထက်ခွေးကိုပိုချစ်သည့် သမီးမိုက်....
ရုရှားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းမှ အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်ရှိမိန်းကလေးတစ်ဦးအား သူမ၏မိခင်အားသတ်ဖြတ်ရန် လူ
သတ်သမားတစ်ဦးအားငှားရမ်းစေခိုင်းခဲ့ သည်ဟူသောစွပ်စွဲချက်ဖြင့် ဖမ်းဆီးထားခဲ့ ပါတယ်...
လူသတ်သမားအား သူမ၏စေခိုင်းချက်တွင် မိခင်ဖြစ်သူအားသေနတ်ဖြင့် ပစ်သတ်ရာတွင် သူမ၏အချစ်
တော်ခွေးအားလုံးဝ မထိခိုက်စေရန် ညွှန်ကြားခဲ့ ပါတယ်...
အမည်မဖော်ပြထားသည့် ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးဟာ သူမနေထိုင်ရာ ဗောကူတာ မြို့ မှ မိတ်ဆွေတစ်
ဥိးအား အသက် ၃၄ နှစ်အရွယ်ရှိ မိခင်ဖြစ်သူအားသတ်ဖြတ်ပေးရန် ရူဘယ်ငွေ ၁၄၀၀၀ (ဒေါ်လာ ၄၇၀)
ဖြင့် ငှားရမ်းစေခိုင်းခဲ့ ခြင်းဖြစ်ကြာင်း မြို့ နယ်တရားရုံးပြောခွင့် ရပုဂ္ဂိုလ် ကလွန်ခဲ့ သည့် ကြာသပတေးနေ့ 
မည်စိုးသောကြောင့် ရွယ်တူယောကျာင်္းလေးများနှင့် အပြင်ထွက်လည်ခြင်းကို တားမြစ်ပိတ်ပင်တတ်သည့် 
မိခင်ဖြစ်သူနှင့် တစ်ချိန်လုံးစကားများနေခဲ့ သည်ဟု ဗော်ကူတာ မြို့ မှတာဝန်ရှိသူကဆိုပါတယ်...
မေ့ မေ့ ထက် ကိုခွေးကိုပိုချစ်တယ်...ကိုခွေးနဲ့ ပဲအတူတူနေမယ်ဆိုတဲ့ သမီးမိုက်...
သို့ သော်လည်းသူမငှားရမ်းခဲ့ သည့် လူသတ်သမားက သူမအကြောင်းအားရဲတပ်ဖွဲ့ သို့ သတင်းပို့ သဖြင့် 
ငယ်ရွယ်သည့် လူသတ်သမားအား သူမ၏မိသားစုနေအိမ်ခန်းသော့ ပေးနေစဉ် ရဲတပ်ဖွဲ့ မှအဆိုပါမိန်းက
ထိုသို့ ဖမ်းဆီးမှု လွန်ခဲ့ သည့် ရက်သတ္တပါတ်ကဖြစ်ပွားခဲ့ သော်လည်း ဤအကြောင်းအရာသတင်းကတော့ 
ကြာသပတေးနေ့ ကမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်....
သူမ၏မိခင်အနေဖြင့် နာကျင်မှုဝေဒနာမခံစားလိုက်ရပဲ ချက်ချင်းသေဆုံးသွားလိမ့် မည်ဟု မိန်းကလေးက
မျှော်လင့် ခဲ့ တယ်လို့ လည်း တရားရုံးဥပဒေအရာ၇ှိကဆိုပါတယ်...
သူမနေထိုင်ရာအခန်းမှတစ်ခြားသူများအားလည်း ထိခိုက်အန္တရာယ်မဖြစ်စေရန် သူမကဂရုတစ်စိုက်စီစဉ်ခဲ့
" ထိုလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုအား မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းဖြစ်သူနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့ စဉ်က မိန်းကလေးအနေ
ဖြင့် သူမရဲ့ အချစ်တော်ခွေးကလေးအားပစ်ခတ်စဉ်လုံးဝထိခိုက်မှုမဖြစ်စေရန်လည်းအသေအချာတောင်းဆို
စီစဉ်ခဲ့ ပါတယ်..." လို့ ဥပဒေအရာရှိကဆိုပါတယ်...
မိန်းကလေးဟာ လူသတ်သမားအား မိုင်းလုပ်သားတစ်ဦးဖြစ်သည့် သူမ၏ဖခင်ဖြစ်သူကိုလည်း သတ်ပေးဖို့ 
တောင်းဆိုခဲ့ ပြီးနောက် သူမအနေဖြင့် ဖခင်ဖြစ်သူထံမှသာ မုန့် ဖိုး၊၀င်ငွေရနေသဖြင့် သာထိုအကြံအစဉ်
အား ဖျက်ပစ်ခဲ့ ပါတယ်...
ယခုအခါ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးအားဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်းထားပြီး လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရန် ငှားရမ်း
စေခိုင်းခဲ့ ကြောင်းပစ်မှုထင်ရှားပါက ထောင်ဒါဏ် ၁၃ နှစ်အထိကျခံရဖွယ်ရှိပါတယ်...
ဘာသာတရားမရှိတဲ့ သူအတွက် မိဘကျေးဇူးဆိုတာလည်း သိနိုင်ဖွယ်မထင်ပါဘူး...
ဒါကြောင့် လည်း မတွေးဝံ့ စရာ မိဘနှစ်ပါးစလုံးကိုသတ်ပစ်ဖို့ ကြံစည်စီစဉ်ခဲ့ တာပါပဲ...
A 16-year-old girl is being held in northern Russia on accusations that she hiredahitman for her mother and specifically instructed him to not harm the family dog in the shooting.
“When discussing the job with her friend, the girl specifically insisted that he not harm her dog, which she lovedalot, during the shootout,” the prosecutor said. The girl was considering also requesting the murder of her father,aminer, but decided against it because his salary was her sole source of income. The teenager is currently in detention and faces up to 13 years in prison if charged and convicted of preparingacontracted murder.
Posted by peter kyaw | at 2:10 AM |
Labels: news: en.rian.ru.com